लुम्बिनी प्रदेश : प्रदेशको राजधानी भएपछि तमसुक बनाउँदै महंगोमा जग्गा बेच्दै ! जोखिममा लगानी - Himali Patrika
लुम्बिनी प्रदेश : प्रदेशको राजधानी भएपछि तमसुक बनाउँदै महंगोमा जग्गा बेच्दै ! जोखिममा लगानी
हिमाली पत्रिका ४ कार्तिक २०७७, 8:36 am
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनासाथ काठमाडौं बस्दै आएका नेकपाका एक नेताका नातेदार दाङको देउखुरी पुगे । उनले मजगाउँ भन्ने स्थानमा १३ कठ्ठा जग्गा किन्न कठ्ठाको ३ लाखको दरले जग्गाधनीलाई ३९ लाख रुपैयाँ बुझाए । तर, अर्का व्यक्तिले त्यही जग्गा प्रतिकठ्ठा १२ लाख रुपैयाँका दरले किने ।
उनले राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याण्डपुलिङको अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने योजना भने रहेको बताए । ‘६०/४०, ७०/३० अथवा ५०/५० को अनुपातका आधारमा हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।